Tin ကို အသုံးပြုမှုအားဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။
ယခုအခါ ကုန်သည်အများအပြားသည် ကုန်ပစ္စည်းများထုပ်ပိုးရန်အတွက် ခဲပြားဗူးများကို အသုံးပြုနေကြသည်၊ ကုန်သည်များသည် tinplate သံဘူးများ၏ အသွင်အပြင် စစ်ဆေးရေးစံနှုန်းများကို သိရှိကြပါသလား။သင်ယခုမျှဝေပါ။1. ပုံနှိပ်အရောင်၊ စာသားအကြောင်းအရာနှင့် လိုဂိုအရောင်တို့သည် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ကိုက်ညီသည် (အရောင်ကွဲလွဲပါက အပေါ်နှင့်အောက် l...
သံပြားဗူးနှင့် သံပြားဗူးများ ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း
စတိုးဆိုင်တွင်၊ လှပစွာထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုသင်မကြာခဏတွေ့နိုင်သည်။တူညီသောထုတ်ကုန်ကို ကွဲပြားစွာထုပ်ပိုးသောအခါ၊ သွပ်ဗူးများတွင်ထုပ်ပိုးထားသောထုတ်ကုန်များသည် ကျွမ်းကျင်လိုသောပထမဆုံးဖောက်သည်များဖြစ်လာလိမ့်မည်။တကယ်တော့ လူတိုင်းက အဲဒါကို ကျွမ်းကျင်ချင်ကြတာ၊ တစ်ခုက သူ့ရဲ့ သပ်ရပ်တဲ့ထုပ်ပိုးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက...
သံပြားဗူးများ စမ်းသပ်ခြင်း စံနှုန်းကို သင်သိပါသလား။
တကယ်တော့ သံပြားဗူးတွေဟာ ဒီအဆင့်မှာ လူတွေရဲ့ဘ၀မှာ ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေတင်မကဘဲ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။၎င်းတို့တွင် အသွင်အပြင်အမျိုးမျိုးရှိ၍ လေးမြတ်မှုအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။အောက်ပါတို့သည် သံပြားဗူးများအတွက် စစ်ဆေးရေးစံနှုန်းဖြစ်သည်။စစ်ဆေးရေးစံနှုန်းကဘာလဲ။1. စစ်ဆေးရေးစတုံ...
သံပြားများ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများ
1. Tinplate ထုပ်ပိုးခြင်းသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများသည် အရင်းအမြစ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဖိအားနှစ်ခုကို အမြဲရင်ဆိုင်ရပါသည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သယံဇာတသုံးစွဲမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုတို့သည် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီး ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သံပြားသေတ္တာများသည် ဘဝတွင် အလွန်အသုံးဝင်သည်။
အတွင်းတွင် ဆေးသုတ်ထားသော သံပြားသေတ္တာများကို စည်သွပ်ဘူးသီးများ၊ ကလေးနို့မှုန့်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် အခြားအစားအစာများကို သိုလှောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။သိုလှောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း သံဓာတ်အနည်းငယ်ကို ရောနှောပြီး အလုံပိတ်သေတ္တာထဲတွင် သတ္တုဓာတ်ပုံစံဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည်။အစာကြေဖို့ အရမ်းလွယ်ပါတယ်..။
လက်ဖက်ရည်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် သံသေတ္တာများတွင် ထုပ်ပိုးထားပြီး လက်ရာမြောက်သော သံသေတ္တာထုပ်ပိုးမှုသည် ပိုလှပရုံသာမက စျေးကြီးပြီး လေထုကိုလည်း ပိုလှစေသည်။လက်ဖက်ခြောက်ဝယ်တဲ့အခါ လက်ဖက်ရဲ့ အရည်အသွေးကို အာရုံစိုက်ရုံသာမက သံသေတ္တာရဲ့ အရည်အသွေးကိုလည်း အာရုံစိုက်ပြီး မြင့်မားတဲ့...
သံဖြူဇိမ်ခံ အသွင်အပြင် စစ်ဆေးရေးစံ...
သံချပ်စမ်းသပ်မှု စံနှုန်းကို သင်သိပါသလား။ ...
အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့...
အဖုံးပါသော သတ္တုသိုလှောင်အိတ်, စိတ်ကြိုက် Tin Box, လက်လီထုပ်ပိုးသေတ္တာများ, လက်ဖက်ခြောက်သေတ္တာ, စီဒီအိတ်များနှင့် အိတ်များ, စီဒီအယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ရပ်မှန်,